Mamiriyoni 2.99 evashanyi veJapan vanozoenda mhiri kwemakungwa muzhizha rino: Guam, Saipan neHawaii dzakakurumbira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mamiriyoni 2.99 evashanyi veJapan vanozoenda mhiri kwemakungwa muzhizha rino: Guam, Saipan neHawaii dzakakurumbira
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Zimbabwe Breaking News • Hawaii Kupwanya Nhau • Investments • Japan Kuputsa Nhau • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Sekureva kwemushumo muJapan Times huwandu hwevanhu vanozoenda mhiri kwemakungwa kubva kuJapan panguva yegore rino yezororo rezhizha vanofungidzirwa kuva mamirioni 2.99, kunyanya kubva JTB Corp. yatanga kunyora data rakadai muna 2000, kambani yakati China.
Nhamba iyi inomiririra kukwira kwe3.5 muzana kubva pagore zvisati zvaitika mune kuratidzwa kwekushandurwa kwemaitiro ebasa kwakasimudzirwa nehurumende, sekureva kwesangano guru rekufamba.
Nzvimbo dzakakurumbira dzinosanganisira Hawaii, Guam uye Saipan.
Ivhareji yemari pamunhu inotarisirwa kukwira 6.2 muzana kusvika, 227,700.
Mutemo wekushandurwa kwemaitiro "wakazviita zvekumanikidza kutora kanenge zororo shanu rakabhadharwa gore rega," akadaro mukuru weJTB. Nekuda kweizvozvo, vashandi vazhinji vakaona zviri nyore kutora akateedzana mazororo, mukuru mukuru akawedzera.
Asi huwandu hwevanhu vanoita husiku husiku kana kwenguva yakareba nzendo dzemumba hunotarisirwa kudzikira 0.2 muzana kusvika 74.3 mamirioni.
Iko kufungidzira kwakavakirwa pamhedzisiro yeongororo yakafukidza avo vanotanga nzendo dzavo pakati paChikunguru 15 naAugust 31. Dhata rekubhuka kwendege uye zvabuda mutsvagurudzo yemibvunzo yepamhepo yakaitwa pavanhu 1,030 muna Chikumi zvakatariswa mukunyora zviyero.
Dzimwe nhau kubva kuJapan: